फायरफक्स क्वान्टम ब्राउजरले तीन विशेषताहरुद्धारा गूगल क्रोमलाई टक्कर दिन सक्छ - Technology Khabar
» प्रविधि » फायरफक्स क्वान्टम ब्राउजरले तीन विशेषताहरुद्धारा गूगल क्रोमलाई टक्कर दिन सक्छ
Technology Khabar ११ असार २०७५, सोमबार
काठमाडौं ।पछिल्ला केहि वर्षदेखि एउटा ब्राउजर इन्टरनेटमा राज गरिरहेको छ- गूगल क्रोम । तर अब एउटा यस्तो ब्राउजर आएको छ जसले यसलाई टक्कर दिने तयारी गरिरहेको छ, त्यो हो फायरफक्स ।
फायरबक्स कुनै नयाँ नाम होईन् । सन् २००२ मा पहिलो पटक फ्री र ओपन सोर्स ब्राउजरको रुपमा लन्च गरिएको थियो । यसलाई मोजिला फाउण्डेशनले विकास गरेको हो, जसको वेबसाइटले इन्टरनेटसम्म सबैको पहुँच बनाउने ग्यारेन्टि दिने किसिमको फ्री सफ्टवेयर बनाउनका लागि प्रतिबद्ध छ ।
जब सन् २००८ मा क्रोम लन्च भयो, त्यसपछि बिस्तार बिस्तार त्यसले बाँकी ब्राउजरहरुको स्थान लिन थाल्यो ।
तथ्यांक उपलब्ध गराउने पोर्टल www.statista.com काअनुसार यो वर्ष मईसम्म ६७ प्रतिशत इन्टरनेट ट्राफिक गूगल क्रोमबाट आउँछ । बाँकी ब्राउजरहरु निकै पछाडिछन जसमा ११प्रतिशत फायरफक्स, ७ प्रतिशत एक्सप्लोरर र ५ प्रतिशत सफारीबाट आउँछ ।
तर मोजिलाले अघिल्लो वर्षको अन्त्यमा फायरफक्स क्वान्टम सार्वजनिक गर्यो र महिना प्रति महिना यसको फलोअर बढिरहेका छन् ।
विशेषज्ञहरुकाअनुसार तीन यस्तो कारण छन जसको आधारमा भन्न सकिन्छ की फायरफक्स क्वान्टम गूगल क्रोमलाई टक्कर दिनको लागि तयार छ ।
ती कारणहरु यस्ता छन्-
फायरफक्समा इन्स्टल हुने एक्सटेन्सन क्रोमको भन्दा निकै कम छन तर तीनले तपाईँलाई अधिक सुरक्षा दिन्छन् । फ्री ब्राउजरमा तपाईँ यस्तो फीचर एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ जसले इन्टरनेट क्रलर्सलाई आफ्नो निजी डाटा संकलन गर्नको लागि रोक्दछ । तर क्रोममा यस्तो गर्नको लागि तपाईँले तेस्रो पक्षद्धारा बनाईएको एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्ने झन्झट उठाउनुपर्नेछ ।
यस बाहेक फायरफक्स क्वान्टममा फेसबुकलाई सिमित गरिदिने सुविधा पनि छ । यसमा तपाईँले सोशल मिडिया प्रोफाइल छुट्टै हुनेछ र त्यसले ब्राउजरमा तपाईँको अन्य गतिबिधिहरु ट्र्याक गर्न सक्नेछैन् ।
फायरफक्स एउटा फ्री ब्राउजर भएको हुँदा, यसको माध्यमबाट व्यावसायिक उद्धेश्यहरुको पूर्ति गर्दैन् । डाटा संकलन गरेर उसले विज्ञापन दिनेहरुलाई बेच्नेमा उसको कुनै रुची छैन् ।
केहि वेबसाइटहरुको भनाई छ कि फायरफक्सको स्पीड क्रोमभन्दा अधिक छ भने केहि वेबसाइटहरु क्रोम अधिक फास्ट भएको मान्दछन् ।
द न्यू योर्क टाइम्सका टेक्नोलोजी एक्सपर्ट ब्रायन एक्स. शेनले एक लेखमा लेखेका छन कि कयौं महिनासम्म दुबैको प्रयोगगरेपछि उनी भन्न सक्छन कि दुबै निकै फास्ट छन् ।
दुबैमा यो अन्तर छ कि फायरफक्स संसाधनहरुलाई सही ढंगले संयोजन गर्दछ र सही तरिकाले त्यसको उपयोग गर्दछ ।
क्रोममा जतिबेला तपाईँ नयाँ ट्याब खोल्नुहुन्छ, यो एउटा नयाँ प्रोसेस शुरु गरिदिन्छ र यसले कम्प्यूटर सुस्त हुन्छ । जबकि फायरफक्समा नयाँ ट्याब लोडिंग स्पीड तिब्र रहन्छ ।
३. डाटाको कम खपत
ब्राउजरलाई फास्ट र हलुका बनाउनको लागि मेमोरीको पनि आवश्यकता हुन्छ ।
मोजिलाको दाबी छ कि फायरफाक्स क्वान्टमले ३० प्रतिशत कम र्याम प्रयोग गर्दछ र यसको ब्याट्री लाइफमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।
स्तंभकार शेनले नेटफ्लिक्सको भिडियो लगातार लूपमा चलाउँदा क्रोमको भन्दा फायरफक्समा ब्याट्री २० प्रतिशत अधिक चलेको पाए ।उनी मान्दछन कि यो निकै ठूलो फरक होईन तथा अझै फायरफक्स क्वान्टमलाई लामो यात्रा तय गर्नुपर्नेछ, तर यी साना साना विषयहरु आशाजनक छन् ।
प्राइभेसीको मामलामा सेक्योरिटी एक्सपर्ट मोजिलाको कामको प्रशंसा गर्दछन् ।
एउटा गैर लाभकारी डिजिटल अधिकार संगठन इलेक्ट्रोनिक्स फ्रन्टियर फाउण्डेसनका सेक्योरिटी रिसर्चर कूपर क्विटिनले न्यू योर्क टाइम्ससँग भने, ‘यस्तो लाग्दछ की फायरफक्सले आफैंलाई प्राइभेसी फ्रेण्डली ब्राउजरको रुपमा स्थापित गरेको छ र त्यो सुरक्षा बढाउने मामिलामा शानदार काम पनि गरिरहेको छ।’
त्यसो भए के यी विषयहरुको आधारमा मोजिला फायरफक्स क्रोमलाई टक्कर दिनको लागि तयार छ त, भनेर भन्न सकिन्छ ?
प्रकाशित: ११ असार २०७५, सोमबार
ड्रोनको सहायतामा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको शव खोजी
नयाँ कानून पारित भएमा भारतमा विकिपेडिया बन्द हुनसक्ने, सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्ने प्राबधान